Shiinaha Aluminium CNC Qaybo Milling iyo Soo-saare | Walley
1.Waxaan nahay warshad leh in kabadan 20 sano waayo-aragnimo machining CNC.
2.Qiyaas ahaan 95% badeecadeenu waa toos la dhoofiyo ilaa USA / Canada / Australia / UK / France / Jarmalka / Bulgaria / Poland / Italia / Netherlands… Tayada la hubo.
3.Badiina mashiinada waxaa laga iibsadaa USA iyo Japan sida HAAS sumadeed (3-dhidib, 4-asxis cnc machines), Walaal, TSUGAMI (6-mashiin leexasho), Miyano iyo wixii la mid ah. markaa waxaan awoodnaa inaan sameyno qaybo sax ah oo sareeya sida waafaqsan shuruudahaaga dulqaad.
4.Waan karnaa si fiican u xakamee dusha sare dhammee sida nadiifinta / burushka / ciida, ciidda caadiga ah / anodize adag, oksaydh madow, dahaadhka
5.waxay ku saleysan tahay tayadeena wanaagsan, adeegga wanaagsan iyo rikoorkeena wanaagsan waxaa naloo xulay inaan nahay alaab-qeybiyeyaasha shirkadda 'ALibaba'. Isku xirka hoose waa qaar naga mid ah taariikhda macaamil ganacsi on Alibaba, waxaad heli kartaa muuqaal.
Mashiinnada Voerly waa soo saare si dhakhso leh u koraya, waxaan rajeynayaa in mustaqbalka aad lammaane noqoto.
Mashiinka CNC wuxuu noo oggolaanayaa inaan si dhakhso leh oo sax ah uga mashiinno qaybahaaga qalabka keydka ee aad dooratay, mid caag ah ama bir ah. Qaababka 2D iyo 3D ayaa si fudud loogu abuuray heer sare oo sax ah iyo dusha sare. Dhammaan hawlgallada mashiinka axdi qarameedka CNC waxaa lagu qoraa qadka iyadoo la adeegsanayo software-ka 'Delcam Powermill'. Qalabaynta iyo horay u sii deynta shaqadu waxay gacan ka geysaneysaa hubinta soo noqoshada degdegga ah iyo saxsanaanta. Waxaan u adeegsan jirnay mashiinnada TaiQun iyo HURCO ee ka socda Taiwan iyo sidoo kale qaar ka mid ah noocyada Shiinaha ee maxalliga ah mashruucyo dhib badan oo baahidoodu yar tahay.
Sax gabal +/- 0.01mm ， + / - 0.005mm
Qaabka sawirka JPEG, PDF, AI, DWG, DXF, IGS, TALLAABO
Qalabka la heli karo Birta: birta kaarboon, birta dahaarka leh, birta aan lahayn, Aluminium, Naxaas iwm
Balaastikada: ABS, PMMA, PTFE, PE, POM, PA, UHMW, iwm
Daaweynta dusha sare Birta: shiidi, Raadinta, Rinjiyeynta, midab-daabacaadda, Electroplating, Daabacaadda shaashadda, Wareegidda qoryaha, Xardho Laser, anodizing iwm
Caaga: shiidi, nadiifinta, Rinjiyeynta, midabaynta daabacaadda midabbada, daabacaadda shaashadda, Xardho Laser iwm
Astaamaha Nooca Waxsoosaarka Nooca Waxsoosaarka
Sax CNC Machining Jeestay, caajis, Drilling, Countersinking, Mread Milling, Threading gudaha / dibadda, Machining iwm
Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa inaan siino macaamiisha wax soo saarka ugu tayada fiican ee ku saleysan qiimaha macquulka ah. Waxaan ku hirgelineynaa xakamaynta tayada wax soo saarka iyada oo loo marayo isku-darka "ka-hortagga" iyo "kormeerka", waxaanan bixinnaa tiknoolajiyad tayo leh oo ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay soo-saarka. Mashiinka saxda ah ee loo yaqaan 'CNC machining machining' ayaa loo galbiyey si loo dhameystiro kalsoonidaada.
Tacliinta iyo tababbarku waa habka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo wax soo saarka hibada. Voerly waxay si joogto ah u qabataa aqoon isweydaarsiyo tayo sare leh iyo shirar tayo sare leh oo lagu kobcinayo xirfadaha mihnadeed ee shaqaalaha tayada leh, si ay ula qabsadaan tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay, ayna buuxiyaan shuruudaha xirfadaha jagooyinka kala duwan
Caafimaadka, Sawirada korontada, Suuqa gawaarida, isgaarsiinta, Hawada iyo Difaaca, Hawada, Amniga, Mashiinada.
Hore: Aluminium CNC Qaybaha Wareejinta
Adeegga Aluminium Aluminium
Qaybaha Mindhicirka Aluminium
Qaybta Aluminium Cnc Milling
Aluminium Cnc Anodizing Aluminium
Mashiinka Aluminium Cnc Qaybta Mashiinka Aluminium